Eyona Webhusayithi yeHoodie yesiqhelo, iiSweaters ezimiselweyo ezimiselweyo-iWG
Shenzhen Wonderfulgold Clothing Co., Ltd. Ibhetshi encinci; Umgangatho ophezulu. Amandla anamandla okuzala kwakhona, umsebenzi olungileyo wokuba njengomthengisi wempahla kwelinye ilizwe ecaleni kwakho. Gxila, yiNgcali!
Izikipa ezisemgangathweni ophezulu ziyafumaneka kukhetho lwakho
Umnqwazi isikhafu Iziqhano
Kutheni ukhetha iWG
Ngaphezulu kweminyaka emi-5 yamava omsebenzi kubasebenzi abanezakhono ngophuhliso lwe-WG. Kwakhona, siqhelene nokuziqhelanisa ne-e-yorhwebo ukubonelela ngemveliso esemgangathweni kunye nokunciphisa ixesha lokuhambisa ukuze uhlangane nolwaneliseko lwakho.
MOQ: Isiqwenga se-1 samkelekile. Sinike umfanekiso, ungayifumana le nto uyifunayo. Ukusuka kuyilo, isitayile, ubungakanani, kwanophawu lwentengiso, iilebhile zokuhlamba, ukupakisha, siya kugcina isimbo sokuqala okanye ukutshintsha ngokweemfuno zakho.
Ixabiso elikhethekileyo kunye nelinokubuyiseka
Inkonzo yokumisa enye yoku-odola, ukuvelisa kunye nokuthengisa, ngenxa yoko amaxabiso exworks anokuqinisekiswa kungekho sithuba phakathi kweqela lesithathu. Akukho maxabiso anyuswayo ngokuzithandela xa sele kuqinisekisiwe.
Ukuhanjiswa kweentsuku ezingama-3-5 zokusebenza. Iqela lethu lobungcali nelisebenza ngokuthengisa lisebenzisa izinto ezininzi ukuya kwenye, okanye inkonzo yokulandela ngomkhondo ngobunye ukuqinisekisa ukufika ngokuchanekileyo kwempahla kwindawo ekuyiwa kuyo.
Isizinda siseShenzhen Wonderfulgold Cl ...
Kule mihla abantu bayathanda ukunxiba iimpahla ezintsha. Kukho ezinye iimilo ezinxiba ngakumbi amanenekazi, anokuthi acaciswe i-silhouette yazo emile kakuhle ....
Ungayikhetha njani ijezi elingana nesilhouette yakho?
Ngokusisiseko ibandakanya isitayile / ipateni, umbala, ukuthelekisa, njl.
Ukulungiswa kwejezi ethembekileyo sinokwenza ngcono kuwe!
Umgangatho wobungcali kunye nezakhono zonxibelelwano zibalasele, Nxibelelana ngqo nabathengi ukuze uqonde iimfuno zakho ngokunzulu, ngaloo ndlela uyile iimveliso ezikwanelisayo.
Inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho ukugcina umahluko wemibala, isampulu yasimahla kwihlabathi.